ဆက်သွယ်ရေးစနစ် ဆိုသည်မှာ အချက်ပြလှိုင်း များကို အကွာအဝေးတစ်ခ
ⓘ ဆက်သွယ်ရေးစနစ် ဆိုသည်မှာ အချက်ပြလှိုင်း များကို အကွာအဝေးတစ်ခုအတွင်း ဆက်သွယ်ရန် ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်အခါတွင် ထိုလုပ်ဆောင်မှုတွင် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင် ..
မြန်မာနိုင်ငံ ငွေလွှဲစာစနစ်ဟောင်းကို တရားဝင်ရပ်ဆိုင်း ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ငွေလွှဲစာ စနစ်သစ်ဖြင့် အစားထိုးခဲ့သည်။ ငွေလွှဲ စာစနစ်သစ်ကို ၁၉၇၈ ခုနှစ် မေလ ၃ ရက် နေ့မှ စတင်၍ အကောင်အထည်ဖော် ကျင့်သုံးခဲ့လေသည်။ ငွေလွှဲ စနစ်သစ်အရ တီထွင်ခဲ့သော ငွေလွှဲစာတွင် လုပ် သားပြည်သူများ နားလည်နိုင်စေရန် မြန်မာစာကိုသာ အသုံးပြု ထားသည်။ ငွေလွှဲစာပုံစံတွင် အပိုင်းသုံးပိုင်းပါဝင်သည်။ ပထမ ပိုင်းကို ဆက်သွယ်ရေး စခန်းတွင် သိမ်းထားသည်။ ဒုတိယပိုင်း ကို ငွေပို့သူက သိမ်းထားနိုင်ပြီး တတိယပိုင်းသည် ငွေလွှဲစာဖြတ် ပိုင်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ငွေလွှဲစာတွင် တန်ဖိုးနှင့် ငွေလွှဲခကို အပြီးရိုက်နှိပ်ထားသည်။ ငွေလွှဲစာများကို တန်ဖ ...
ဂစ်တ်ဟပ်ဘ် သည်အမေရိကန်အခြေစိုက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ဆော့ဖ်ဝဲတည်ဆောက်ရေး၏ ရင်းမြစ်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် လိုအပ်သောဂစ်တ်ရီပိုစစ်တရီများ ကို ထိန်းသိမ်းပေးပြီး အင်တာနက်ကို အသုံးပြု၍ ဝက်ဘ်မှတစ်ဆင့် ဖြန့်ချိပေးနိုင်ရန် နေရာနှင့်လိပ်စာ ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ၎င်းသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇.၅ ဘီလီယံဖြင့် မိုက်ခရိုဆော့ဖ်（Microsoft） ပိုင် ကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ဖြန့်ဝေထားသော ရင်းမြစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ် နှင့် ရင်းမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအလုပ်များကို ဂစ်တ်ကိုသုံး၍ ထောက်ပံ့ပေးပြီး အဆိုပါ စနစ်များနှင့် ဆက်စပ်ရာ အခြားလိုအပ်ချက်များကိုလည်း ထပ်ပိုးပေးသည်။ ၎င်းသည် ဆော့ဖ်ဝဲတည် ...
ရေအောက်ဓာတ်ကြိုး သည် ရေမျက်နှာပြင်အောက်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သယ်‌ဆောင်ရန်အတွက် ဖန်တီးထားသည့် ဓာတ်ကြိုးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အား ရေငုပ်သင်္ဘော"submarine" ဟူ၍ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားခေါ်ဆိုကြရသည်မှာ အဆိုပါ ဓာတ်ကြိုများသည် ရေငန်အောက်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သယ်ဆောင်နိုင်ကြပြီး ရေချိုဖြစ်သည့် မြစ်များနှင့် ကန်ကြီးများအောက်တွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်သေးသည်။ ဥဒဟာရုဏ်အနေဖြင့် ကုန်းမကြီးနှင့် ဆက်သွယ်ထားသည့် စိန့်လောရင့်စ်မြစ်အတွင်းရှိ ကျွန်းကြီးများတွင် အသုံးပြုကြသည်ဖြစ်၏။
မြန်မာနိုင်ငံ ဗိသုကာကောင်စီ ၂၂၈-၂၃၄၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ ရန်ကုန်၊ မြန်မာနိုင်ငံ။ ဝက်ခ်ဆိုက် - www.mac.org.mm
ဟိဂရှိနရုဆဲ သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ အခိတစီရင်စုတွင် တည်ရှိသည့် ကျေးရွာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ကျေးရွာရှိ ခန့်မှန်းလူဦးရေသည် ၂၅၁၂ ဦးရှိပြီး အိမ်ထောင်စု ၉၀၂ စု ရှိသည်။ လူဦးရေသိပ်သည်းဆသည် ၁ စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၁၂ ဦး ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာ၏ စုစုပေါင်းဧရိယာသည်၂၉၃.၅၇ စတုရန်းကီလိုမီတာ ရှိသည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် ဟိဂရှိနရုဆဲည် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ အလှပဆုံးသောရွာများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
SQLite ဆိုသည်မှာ Relational database management system တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အခြား system များနှင့် အဓိကကွာခြား ချက်က SQLite သည် Embedded database တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှန် database တွေဆိုရင် client and server က process နှစ်ခု ဖြစ်ပြီး client က data ကို Pipe သို့မဟုတ် Networking မှတဆင့် server ကိုဆက်သွယ်ပြီး data ကို access လုပ်ပါတယ်။ Embedded database များတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် process တစ်ခုသာ ရှိပြီး database file မှာလည်း တစ်ခုရှိသည်။
တခယာမရွာ သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နဂနိုစီရင်စုတွင် တည်ရှိသည့် ရွာတစ်ရွာ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁ ရက်နေ့၌ ရွာတွင် ခန့်မှန်းလူဦးရေ ၇၁၀၁ ဦးရှိကာ အိမ်ထောင်စု ၂၄၆၆ စု ရှိသည်။ လူဦးရေ သိပ်သည်းဆမှာ တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၇၂ ဦး ရှိသည်။ ကျေးရွာ၏ စုစုပေါင်း ဧရိယာသည် ၉၈.၅၆ စတုရန်းကီလိုမီတာ ရှိသည်။ တခယာမရွာကို ဂျပနိုင်ငံရှိ အလှပဆုံးကျေးရွာများထဲမှ တစ်ရွာအဖြစ် စာရင်းသွင်း သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။
စကား ဖန်တီးထုတ်လုပ် စက်များ ကို အသံထုတ်ပေးသော ဆက်သွယ်ရေးအကူအညီကိရိယာ အဖြစ်လည်းသိရှိကြသည်။ ဤကိရိယာ၌ စကားပြောဆိုခြင်းဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မှုဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် စကားပြောဆိုခြင်း၌ အလွန်ချို့ယွင်းချက်ရှိသောသူများအတွက် ပြောဆိုခြင်း၊ ရေးသားခြင်းများကို အစားထိုးရန် ဖြည့်စွက်ထောက်ပံ့ရန်အလို့ငှာ အီလက်ထရောနစ် အရည်သွေးမြှင့်တင် အခြားနည်း ဆက်သွယ်ခြင်း စနစ်များကို အသုံးပြုထားသည်။ ဤSGDs ကိရိယာများသည် ဆက်သွယ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းများ၌ တက်ကြွသော ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူများဖြစ်လာစေရန်အတွက် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်သောကြောင့် နှုတ်မှုရေးရာ တုံ့ပြန်နိုင်မှု အကန့်သတ်ရှိသောသူများအတွက် အရေးပါသည်။ အထူးသဖြင့် ဆိုးရွားသော အာရုံ ...
စာကလေးတောင် ဟုခေါ်ခဲ့)သည် မော်စကိုမြစ်၏ ညာဘက်ကမ်းတွင်တည်ရှိပြီး မြစ်ရေမျက်နှာပြင်ထက် ၆၀–၇၀ မီတာ မြင့်ပြီး ၂၂၀ မီတာ မြင့်မားကာ မော်စကိုမြို့ရှိ အမြင့်ဆုံးသောနေရာများမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှုခင်းသာမှနေ၍ကြည့်လျှင် မြို့၏ လှပသော မြင်ကွင်းကျယ်ကို မြင်နိုင်ပြီး ထိုရှုခင်းသာသည် မြစ်၏ ၈၅ မီတာ ၂၇၉ ပေ မြင့်သော မတ်စောက်သော ကမ်းပါတွင် တည်ရှိပြီး ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက် ၂၀၀ မီတာ ၆၆၀ ပေ မြင့်သည်။ ၁၉၈၀ နွေရာသီ အိုလံပစ်အားကစားပွဲတော်1980 Summer Olympicsနှင့် ၂၀၁၈ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတို့၏ ဖွင့်ပွဲနှင့် ပိတ်ပွဲတို့ကို ကျင်းပခဲ့သည့် လုရှ်နီကီ အားကစားကွင်းယခင် လီနင် အားကစားကွင်းသည် ရှုခင်းသာမှ လှမ်းမြင်နိုင်သေ ...
နိုင်ငံတော်ကောင်စီ သည် ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားသော အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။အခြေခံဥပဒေအရ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် မူဝါဒများကို စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်ရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ ဖွဲ့စည်းပေးထားသည်။နိုင်ငံတော်ကောင်စီ၏ ဥက္ကဋ္ဌသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်သည်။နိုင်ငံတော်ကောင်စီကို အဖွဲ့ဝင် ၂၉ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းသည်။ တစ်ပါတီခေတ်စနစ်ဖြစ်သဖြင့် နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်များသည် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီဝင်များသာဖြစ်ကြသည်။ဖွဲ့စည်းပုံအရ မည်သို့ပင် ဖွဲ့စည်းစေကာမူ အမြင့်ဆုံးအာဏာသည် ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးနေဝင်း၏ လက်ဝယ်တွင်သာ တည်ရှိသည်။ဦးနေဝင်းသည် နိုင်ငံတော်သမ ...
ဆက်သွယ်ရေးစနစ် ဆိုသည်မှာ အချက်ပြလှိုင်း များကို အကွာအဝေးတစ်ခုအတွင်း ဆက်သွယ်ရန် ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်အခါတွင် ထိုလုပ်ဆောင်မှုတွင် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်း များကို ထုတ်လွှင့်စက် မှ ထုတ်လွှင့်ခြင်း အမြဲလိုပင် ပါဝင်လေ့ရှိသော်လည်း ရှေးအခါက မီးခိုးအချက်ပြမှု၊ ဗုံဖြင့်အချက်ပြမှု၊ ပုံသဏ္ဌာန်ဖြင့်အချက်ပြမှု စသည်တို့ ပါဝင်လေ့ရှိသည်။ ယနေ့အခါတွင် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်သည် အလွန်ကျယ်ပြန့်ပြီး ထိုစနစ်ကို ကူညီပံ့ပိုးပေးသော တယ်လီဗေးရှင်း၊ ရေဒီယိုနှင့် တယ်လီဖုန်းများကို နေရာတကာတွင် တွေ့နိုင်သည်။ ထို ကိရိယာများကို အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ပေးသော ကွန်ယက်များသည် ကျယ်ပြန့်စွာတည်ရှိကြပြီး ကွန်ပျူတာကွန်ယက်၊ အများသုံးတယ်လီဖုန်းကွန်ယက်၊ ရေဒီယိုကွန်ယက် နှင့် တယ်လီဗေးရှင်းကွန်ယက် စသည်ဖြင့် အမျိုးအစားကွဲပြားစွာတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကွန်ပျုတာများ အင်တာနက်အတွင်း၌ အချင်းချင်းဆက်သွယ်ခြင်းမှာ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်၏ ထင်ရှားသော ဥပမာတစ်ခု ဖြစ်သည်။
အင်္ဂလိပ် အခေါ်အဝေါ် Telecommunication ဆိုသော စကားလုံးမှာ ပြင်သစ်စကားလုံး télécommunication မှရယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုစာလုံးမှာ ဝေးကွာသောနေရာ ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသော ဂရိစာလုံး tele- τηλε- နှင့် ဝေမျှသုံးစွဲရန် ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသော လက်တင်စကားလုံး communicare တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်စာလုံး télécommunication မှာ ပြင်သစ်နိုင်ငံသား အင်ဂျင်နီယာနှင့် ဝတ္တုရေးဆရာဖြစ်သော Édouard Estaunié မှ ၁၉၀၄ ခုနှစ်တွင် စတင်သုံးစွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၁။ အချက်အလက်များကို ရယူပြီး ထုတ်လွှင့်ချက်များအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသော ထုတ်လွှင့်စက်‌ Transmitter ၂။ ထုတ်လွှင့်ချက်များကို သယ်ဆောင်ပေးသည့် ကြားခံ ဆက်သွယ်ရေးနယ်မြေTransmission Medium ၃။ ထုတ်လွှင့်ချက်များကို ဖမ်းယူပြီး အသုံးချနိုင်သည့် အချက်အလက်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည့် လက်ခံကိရိယာReceiver စသည်တို့ ဖြစ်သည်။
ချန်နယ်ဆိုသည်မှာ အချက်အလက် Signal ကို သယ်ဆောင်နိုင်သည့် ရေဒီယိုလှိုင်း Frequency တစ်ခု သို့မဟုတ် အတွဲလိုက်ရှိသော ရေဒီယိုလှိုင်းများကိုဆိုလိုသည် သို့ဖြစ်ရာ လှိုင်းနှုန်းတစ်ခုတည်းကို တစ်လှည့်စီသုံးသည့် Simplex နှင့် လှိုင်းနှုန်းတစ်ခုစီကို အသွားအပြန် တစ်ပြိုင်နက်သုံးသည့် Duplex ဟူ၍ မူရင်း ၂-မျိုးရှိသည်
3.1. သမိုင်းကြောင်း ဆက်သွယ်ရေးစနစ်၏ အစ
3.2. သမိုင်းကြောင်း ကြေးနန်းနှင့် တယ်လီဖုန်း
‌ကြေးနန်းသည် ‌ကြေးနန်းကြိုးတလျောက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးပို့ခြင်းဖြင့် အနည်းငယ်မျှသောအချက်အလက်များကိုပေးပို့နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် အသံကိုသယ်ဆောင်ရန်အတွက်မူ လိုအပ်သည့် အရည်အသွေးမပျောက်ပျက်စေရန် မိုက်ကရိုဖုန်း စပီကာတို့အပြင် ကြားခံချိတ်ဆက်မှုလည်းကောင်းမွန်ရန်လိုအပ်သည်။ သတင်းခေတ်တွင် စာသား အသံ ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံ အားလုံးကို အချက်အလက် ဟုစုပေါင်းခေါ်ဆိုပါသည်။
3.3. သမိုင်းကြောင်း ရေဒီယိုနှင့် တယ်လီဗေးရှင်း
ရေဒီယိုသည် သတ်မှတ်ချယ်နယ်တွင် အများပြည်သူနားဆင်ရန် အသံလွှင့်ရုံမှအသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုသည့်ချယ်နယ်ကိုလိုက်၍ အေအမ်Amplitude Modulation -AMတွင် လှိုင်းတို လှိုင်းလတ် စသည်ဖြင့်ခေါ်ဆိုကြသည်။ မြို့တစ်မြို့ဝန်းကျင်သာဖမ်းယူရရှိသည့် အက်ဖ်အမ်Frequency Modulation-FMစနစ်ကို မြို့တွင်းသွားကားများ အသေးစားရေဒီယိုများဖြင့်ဖမ်းယူကြသည်။ အချို့နိုင်ငံများတွင် အက်ဖ်အမ်Frequency Modulation-FMစနစ်ကို အများပြည်သူသို့အသိပေးသင့်သည့်ကိစ္စများ ပမာအားဖြင့် လမ်းပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပေါ်သည့် ကိစ္စများ ဆူနာမီသတိပေးခြင်း မုန်တိုင်းသတိပေးခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ရန်ကုန်မြို့တော် City FM၊ မန္တလေးမြို့တော် City FM၊ နေပြည်တော်မြန်မာ့အသံ၊ ပိတောက်မြေ တို့မှာ နားဆင်သူများပြားသည့် ပြည်တွင်းအသံလွှင့်ရုံများဖြစ်ကြသည်။